वासिङ्टन डी.सी. मा नेजाको साधारणसभा सम्पन्न | newsnepali.com
वासिङ्टन डी.सी. मा नेजाको साधारणसभा सम्पन्न
२४ वैशाख, अमेरिका । नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाको ११ औ सधारण सभा अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डी. सी.मा शनिवार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाको उद्घाटन प्रमुख अथिती तथा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव उजिर मगर र नेजाका अध्यक्ष भोला आचार्यले पानसमा बत्ती बालेर गर्नु भएको थियो ।
साधारण सभाका लागि डिसी महानगर क्षेत्र वरपरका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूबाट आएका सञ्चारकर्मी ,आमन्त्रीत अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा नेजाद्वारा स्थापित “नेजा सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कार” अन्तर्गत पत्रकारहरु क्रमशः शिव प्रकाश, मनोज अधिकारी र दिनेश कार्कीलाई संयुक्तरुपमा १ हजार १ सय ११ डलरको
पुरस्कार प्रमुख अतिथि उजिर मगरले हस्तान्तरण गर्नुभयो । पुरस्कार स्वरूप प्राप्त रकम पत्रकारहरुले चितवनको सामाजिक संस्था सानो घरलाई दिने घोषणा गरेका छन् ।
उक्त बहस कार्यक्रममा अध्यक्षका उम्मेदवारहरु डा. केशव पौडेल, डिल्ली भट्टराई ,राम सी पोख्रेल र गौरी जोशीको सहभागिता रहेको थियो । साधारण सभाको बन्द सत्रले विधान संशोधन गर्नुका साथै महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ ।